Okestream Apk Dhawunirodha 2022 Ye Android [Rarama Bhora] - Luso Gamer
Okestream Apk Dhawunirodha 2022 Ye Android [Rarama Bhora]
March 2, 2022 January 12, 2022 by John Smith
Iwe unofarira kutamba Nhabvu uye nekuda kweiyo yakabatikana chirongwa, ikozvino haugone kutamba mutambo. Kana hongu saka usazvidya moyo nekuti nhasi vadzoka neiyo itsva Okestream App. Izvo zvinopa vateveri venhabvu kuyerera emahara nhabvu nhabvu mitambo kusanganisira yavo yepamberi purogiramu nguva.
Sezvatakambotaura muzvinyorwa zvedu zvisati zvaitika. Chinangwa chikuru chewebsite yedu kupa zvinhu zvitsva. Izvo hazvingopi chete rubatsiro muvashandisi hupenyu asi zvakare zvinopa vatengi vatengi. Saka ichapa chiitiko chinogutsa.
Kana tichitarisa humbowo hwazvino kupfuura hwatakawana peek iri mukati megrafu. Zvinoreva kuti vateveri venhabvu vari kuwedzera uye ndiwo chete mutambo wemitambo. Iyo inoridzwa uye inoonekwa pasirese zvinoreva kuti haidi chero kushambadzira kwekuzivisa vanhu nezve mukurumbira wayo.
Paive nenguva apo vateveri vanofarira kufamba mazana emakiromita kuti vaone imwechete mutambo. Asi ikozvino nyika iri mumhepo yekudzima nekuda kwedambudziko redenda. Uye vanhu havagone kuenda kunzvimbo dziri kure nekuda kwekuchengetedza matanho. Kunyangwe hazvitenderwe kuti vanhu vepedyo vapinde munhandare.
Kutarisa padambudziko uye mafeni anoodza mwoyo vagadziri vakagadzira iyi nyowani IPTV App. Iko kune vateveri venhabvu vanogona kufambisa mitambo yemitambo yemahara. Ehe, hazvidi chero kunyoreswa kweprimiyamu yekufambisa mitambo yemitambo.
Saka kana iwe uri fan of nhabvu yemutambo uye usingakwanise kushanyira padyo nenhandare yemitambo mhenyu. Asi zvakadaro, haugone kupotsa imwe chete nguva. Ipapo tinokurudzira kuti iwe uise iyo App kubva pano. Ndeipi yemahara kurodha pasi nekamwe kficha.
Chii chinonzi Okestream Apk
Chaizvoizvo, iri pamhepo vhidhiyo yekushambadzira application yakanyanya kugadzirirwa yenhabvu inodzora. Kunze uko mapuratifomu mazhinji akafanana arikupa kutenderera kuripo ne zero lag. Saka nei mumwe munhu achifanira kusarudza iyi Apk yemitambo mhenyu?
Mhinduro yacho yakapusa nekuti mapuratifomu akadaro anopa kutenderera kuripo anoda kunyoreswa kweprimiyamu. Zvichireva pasina kutenga iyo yekutanga kunyorera hazvigoneke kuteedzera machisi. Asi kana zvasvika pane ichi chishandiso pane icho chiri chemahara kutenderera.
zera 5.5 MB
Package Zita com.oke.stream
chikamu Apps - Sports
Kunze kwezvinhu izvi zvakasarudzika, ivo vanogadzira vakabatanidza akawanda mapoka mukati mayo. Izvo zvikamu zvakaiswa muzvikamu zvakasiyana. Saka vataridzi vanogona kusiyanisa zviri nyore makwikwi achiverenga iwo mazita ezvikamu.
Uyezve patinochera zvakadzika kupfuura zvatakawana iyi purogiramu pamusoro pechidzitiro chepamusha. Izvo zvinotungamira vashandisi maererano nemitambo isina kunzwisiswa uye yavo yekutanga nguva. Rangarira kuti Anwendung haina kuwana chero kutenderera kana kuti haisi yega chivakwa chacho.
Zvinoreva nguva zhinji iyo iyo Apk inotora iyo vhidhiyo kutenderera kubva kune wechitatu mapato mawebhusaiti. Kuita kuti ive inoteerera vanogadzira vakawedzera akawanda ekushambadzira zvinongedzo kusanganisira maseva mukati. Saka muoni anogona kushandura sevha pamusoro pemutambo.
Kudhawunirodha iyo Apk yemahara nechete-tinongedzo.
Izvo hazvidi chero kunyoreswa.
Izvo zvakare hazvitsigire wechitatu-bato kushambadzira.
Iyo yakarongedzwa purogiramu inosvikika kuverenga pamusoro peji reimba.
Kunyangwe iyo yekurarama yekutenderera sarudzo iripowo pane epamba peji
Mune yeparutivi menyu, vanogadzira vakabatanidza akawanda mapoka.
Injini yekutsvaga yekumberi inosanganisirwa.
Panyaya yekushandisa iri nyore kwazvo.
Maitiro Ekuburitsa Iyo App
Kana zvasvika pakurodha pasi yakagadziridzwa vhezheni yeApk Mafaira. Zvino isu tinokurudzira vashandisi venhare kuvimba newebhusaiti yedu nekuti isu tinongogovana maApplication echokwadi uye echokwadi. Kuti uve nechokwadi chekuti mushandisi anovarairwa nechakanaka chigadzirwa.
Isu tinoisa iyo yakafanana faira pamusoro pemidziyo yakasiyana. Kana tangova nechokwadi chekuti yakagadzikana uye inoshanda kushandisa. Ipapo tinozvipa mukati mechikamu chekurodha pasi. Kuti udzivirire yazvino vhezheni yeOkestream App ndapota tinya pane yakapihwa download bhatani bhatani.
Unogona zvakare kuda kurodha
Kusvikira ikozvino ichi ndicho chakanakisa uye chakavimbika chikumbiro uko vateveri venhabvu vanokwanisa kuyerera mhenyu mitambo yemahara. Ipo kushandiswa kana ukatarisana nedambudziko chero ripi zvaro sununguka kutaura nesu. Tinodzoka kwauri kana tangogamuchira yako query muchikamu chekubata.
Categories Apps, Sports Tags IPTV App, Okestream, Okestream Apk, Okestream App Post navigation
Zuva reSarudzo reGuta Rangu Apk 2022 Dhawunirodha Ye Android [Yazvino]
Sejuta Cita Apk Dhawunirodha Ye Android 